Heshiis laga gaaray siyaasada Dalka Congo - BBC Somali
Heshiis laga gaaray siyaasada Dalka Congo
1 Jannaayo 2017
Wasiiro sar sare oo ka tirsan dowladda Jamhuuriyadda dimoqraadiga Congo ayaa heshiis la saxiixday mucaardka dalkaasi si loo soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee sii kordhaya ee wadankaasi ka taagnaa, Balse heshiiskan waxaan weli saxiixin Madaxweyne Joseph Kabila.
Mudeyntii xilka madaxweyne Kabila wey dhamaatey, Doorashadii ayaa dib loo dhigey, Dad badan oo dibadbaxyo sameeyeyna wey dhinteen. Xubnihii dhexdhexaadinayey labadada dhinac ayaa sheegey in ay labada kooxood qarka u saarnaayeen in ay saxeexaan inuu Madaxweyne Kabila xilka sii hayo ilaa dhamaadka sanadka 2017, Mudadaasna lagu qorsheeyo in doorashada la qabto.
Image caption Madaxweyne Kabila
Waxaa la magacaabi doonaa Ra'iisal Wasaare kasoo jeeda dhanka mucaaradka.
Madaxweyne Kabila wuxuu xukunka qabtay laba jeer taasoo uu dastuurku u ogol yahay.
Laakiin doorashadii la filayay in ay waddanka ka dhacdo ayaa la baajiyay waxaana ka dhashay qalalaaso kadib markii Kabila uu diiday inuu xilka ka dago.
Dowladdu weli kama aysan hadlin heshiiskan ay mucaardku shaaciyeen.